AmaKomiti: Inhliziyo eyelusa intuthuko – Msunduzi News
KUMASIPALA amakomiti ahlakula indima emqoka ekuqnisekiseni ukuthi umasipala wenza lokho okuklanywe nguMthethosisekelo kanye nemithetho elawula ukusebenza koHulumeni Bendawo. Njengengxenye yokufundisa kabanzi ngawo, sizoba nochungechunge lwemibiko yokusebenza kwamakomiti. Lokhu kuzobandakanya izingxoxo nosihlalo bawo kanye namalungu kepha okumqoka kakhulu wukwelusa ukuthi izinqumo ezithathwe yila makomiti ziyenzeka yini nokuyinto emqoka. Ngokwesimiso sikaMasipala ayisi-6 amakomiti akhona nokuyilawa alandelayo: iSustanable Development and City Entities, iCorporate Services, iFinancial Services, iMunicipal Public Accounts Committee kanye ne-Infrastructure Services. Kule mbulambethe sixoxisane neKhansela u-Eunice Majola
nonguSihlalo weKomiti iSustanable Development and City Entities. Ngokusho kuKaMajola leli Komiti elinamalungu ali-13 libhekele la ma- Unit alandelayo; iCity Entities, iBusiness Development, iHuman Settlements, iDevelopment Planning and Environment, i-Economic Development kanye neTown Planning and Envirnoment Management. Engxoxweni ekhethekile phakathi kokunye uMajola uthe iKomiti aliholayo
liyinhliziyo njengoba lelusa izinto ezimqoka nezibonakalayo. Wenze isibonelo ngodaba lokuhlinzekela abantu ngezindlu nathe kuyinto edingekayo nenzima. Ukhale ngesithombe athi asilona iqiniso odabeni lwezindlu nokuyisithombe esithi amaKhansela kawalusukumeli ngokuyikho lolu daba.
Uthe lokhu akulona iqiniso, uma kuwukuthi kunokubambezeleka kungenxa yemigudu okumele nakanjani ilandelwe.
Uveze ukuthi ngokohlelo kunezindlu eziyizigidi ezingama-20 okumele zakhiwe nokusahlelwa ngakho wabe eseveza ukuthi ngonyaka owedlule kunezindlu eseziphothuliwe kwaVulindlela eziyinkulungwane ezingama-25, eThembalihle zingama-762, eThamboville zingama-416. Khona lapho uchaze ngoPhiko olubhekelele iNtuthuko Yomnotho Wendawo nathe lusekhaleni lokufukula umnotho wendawo nathe kwenzeka ngokubambisana nezinye izinhlaka ezikulo mkhakha. Lolu Phiko phakathi kokunye lubhekelele ukuthuthukiswa kwamabhizinisi nosomabhizini abasakhasayo eMsundazwe. Uveze ukuthi uPhiko lolu lubambisene nesikhungo iThala kanye neSmall Enterprise Development Agency.
Ngesikhathi ethula inkulumo yakhe uNgqongqoshe Wezezimali uMhlonishwa uTito Mboweni uphawule ngobumqoka bentuthuko kwenye ingxenye yoMsunduzi. “EMkhandlwini uMsunduzi imali elinganiselwa ezigidini ezingama-77 zingene ohlelweni lokuthuthukisa indawo i-Edendale nokuwuhlelo oselulethe uxhasomali olulinganiselwa esigidigidini esisodwa samarandi (R1bn),” kusho uMboweni.
Kulokhu uMajola ugcizelele ubumqoka bale ntuthuko uthe uhlelo lokuthuthukisa le ndawo lumqoka kakhulu futhi luzochamisela hhayi kuphela intuthuko yengqalasizinda kepha namathuba emisebenzi. Uveze ukuthi uHulumeni kuzwelonke ukhiphe isamba eziyizigidi ezingama-42 zamarandi, kunyaka wezimali wezi-2018/19.
“Kuningi okwenzakalayo endaweni yakithi. Bheka nje kuneYouth Enterprise Park, neLight Industrial kuWadi 19. IYouth Enterprise Park yilapho kuzokwenziwa indawo osomabhizinisi abancane abazosebenzela khona. Le ntuthuko yenzeka ngosizo loMnyango Wezokubusa Ngokubambisana Nezindaba Zomdabu. Kanti iLight Industrial yilapho kulungiswa izakhiwo ezindala ezasala dengwane ngesikhathi sodlame zibe sesimweni sokusebenzela khona abantu bezokwazi ukusebenza kuleya ndawo. Kude buduze ne-Light Industrial kuneManaye Hall elungiswayo ngemali ekhishwe nguMnyango Wezokubusa Ngokubambisana Nezindaba Zomdabu. Njengamanje kusabhekenwe nendaba yokususa abantu abakhe eduze kwale ndawo ukuze intuthuko iqhubeke nokuyinto uMkhandlu ofisa ukuyenza ngesinwe,” kusho uKaMajola
Ube esechaza nangohlelo olukuWadi 23 nokuyindawo eshuka izikhumba ngenhloso yokwenza izicathulo namabhande phakathi kokunye. Uchaze ngokuthi lolu hlelo luke lwama nokho uthe lokho sekwedlule. “Umsebenzi uke wama ngize ngakhuluma noMhlonishwa uSihle Zikalala, weluleka ngokuthi akuthintwe abathile nokuthe emuveni kwalokho lathombululeka ifindo. Ngikhuluma nawe nje kunemihlangano ehleliwe ukuze kuqhutshekwe nokwabe sekuqaliwe,” kusho uSihlalo.
UMajola ukugcizelele ukuthi yonke imisebenzi engumklamo kuloNyaka Wezimali kanye nakule minyaka emihlanu iyenzeka.
“NjengoSihlalo ayikho into engangijabulisa njengokuphothula imiklamo yemisebenzi okumele yenziwe njengoba sisuke sesizibophezele kubantu baseMsunduzi. Uma sisebenza ngokubambisana siyophumelela ezifisweni zethu zokuthuthukisa uMsunduzi,” kuphetha uMajola.
Izinhlelo zokuqinisa umsebenzi weCall Centre
Previous post: Council pushes back against illegal, fake products
Next post: Isimo sisenguginqigonqo